China Smart Door Lock Fekitori, Smart Door Lock Mutengesi
LVD N dzakateedzana
LVD N sesries inowirirana neiyo narraw Al-alloy pamberi pesuwo .Inogona neNFC.
Inoenderana neAmazon Alexa, google kumba, IFTTT.
LVD T DZAKATEVEDZANA
T1 yakagadzirirwa cycinder yakavakirwa-mukati mukiragi, iine akasiyana masystem ekudzora kumberi nekumashure mapaneru, uye inemidziyo inoenderana nezvinhu zvekudzivirira kupesana kwemagetsi.
LVD-06SF ndeye Zinc alloy semi-conductor biometric fingapurindi yeminwe yefurati / hofisi musuwo wemapuranga kana musuwo wesimbi. Mune imwe chete smart door gonhi, ndiyo yakanakisa mutengesi mune zvitsva zvigadzirwa mitsara.
Kufambisa kwezwi kuitira nyore kushanda
Yakadzika voltage alarm
Bata screen keypad, bhuruu backlight manhamba
Simudza mubato wakakiiwa kaviri
LVD06S Bata Screen
Imba Smart Dhijitari Yekupinda Door Lock
Pasiwedhi nyore basa
Tsigira TUYA KANA TTLOCK APP
Isu tinoteerera neiyo bhizinesi uzivi hwe "mhando yekuvimbika, mukurumbira wekuvandudza". Simbisa kubatana kwepasi rese kuti uve nechokwadi chekutarisa-mberi uye tekinorojibudiriro yezvigadzirwa.
LVD-05F mhando nyowani yemagetsi bluetooth yekupinda musuwo yekukiya yakagadzirwa ne advanced furati uye tenement manejimendi system. Inosanganisira maviri akakosha patent uye mazhinji matekinoroji. Uye inotsigira mitauro gumi neimwe uye inogona kudhawunirodwa nekuiswa munyika zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe neTTlock App.
Yepamberi zvemagetsi uye biometric tekinoroji inogonesa yemagetsi kukiya kuve nehungwaru kuzivikanwa kugona, izvo zvinoita kuti vatengi’ basa nehupenyu zviri nyore uye zviri nyore.
LEI-U Keypad Fingerprint Smart Door kukiya ndiyo mhando nyowani yekuchenjera musuwo rakazvimiririra rakagadzirwa nekambani yedu. Iva nenzira dzakasiyana dzekuvhura: zvigunwe zvemunwe, APP, password, mehendi kiyi, IC kadhi.
LVD-06MFE idhivha nyowani yeminwe yeminwe, iyo inogona kuve panzvimbo yechinyakare vhezheni yemagetsi gonhi uye ichavhara otomatiki mushure mekushandisa, inova smart uye iri nyore. Chigadzirwa chine chitarisiko chechitarisiko, mitsara yakasununguka uye yakatsetseka, uye inoshandisa electroplating tekinoroji. kuunza yepamusoro-soro kunzwa.
Izvi zvinoitirwa musuwo wegirazi uye zvinosangana zvemuhofisi .Company inoshanda mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kweakachenjera maziso ekuziva kumeso, zvigunwe zveminwe, zvigunwe zvevhudzi, dzimba dzemafurati, kukiya kabhodhi uye mamwe akateedzana mapaneru. Iyo kambani yakagara yakanamatira kune yakakwira nhanho yemhando uye sevhisi yezvinangwa zvebhizinesi, kupa vatengi vane yakatsiga smart kukiya kunyorera chirongwa.
LVD-06G inochinja password Password Lock neiyo yepamusoro 5-in-1 yekuwana uye yakasimba kuchengetedzeka maficha.
Iyo ine yakasimba simbi mameseji, uye ruvara rwakapfava kupenya, mushure mekuomarara kwesainzi maitiro, ndiyo chaiyo yekutengesa kukiya kwemabhizinesi, imba neimba inoda mukana wevanhu vakawanda. Iyo inouya neine mortise, kunyanya yakanaka kune ekunze magonhi.
Iwe unogona kupa zvenguva pfupi makodhi kune vashanyi, vashanyi, vanochengeta dzimba kana vashandi - akakwana nzvimbo yekushandira, Imba, hotera, chikoro, uye furati.
LVD-07S Tuya ndiyo iri nyore kwazvo kuisa yakangwara gonhi kukiya.
Remote control negedhi, chengetedzo yepamusoro uye inoita kuti hupenyu hwako huve nyore uye nyore.
LVD07MFP Tuya iri yakapusa chimiro ine zvigunwe zveminwe uye Tuya Apps.
Maitiro Ekushandisa: Hofisi Kuvaka
Kuenda Management: Maawa ekushanda anogona kusetwa, uye basa iri rinotsigira vashandi kusarudza zvigunwe, App, password kana IC kadhi yeawa-in. Unogona kutarisa huwandu hwevashandi mumwedzi wega wega, kusanganisira kunonoka, kubva mangwanani, uye hapana wachi-mukati.
Gadzirisa dambudziko remakiyi manejimendi emahofisi akawandisa, makamuri ekuenzanisira, makamuri emusangano, matura nezvimwewo.
Yakachengeteka kukiya maitiro, kubaya-kamwe kunoita kuti hofisi yako ive yakavanzika nzvimbo.
LVD07MFE Tuya inyanzvi Nharembozha Kudzora Biometric Door Lock, yakakwana kumba, hofisi, hotera, furati yekuchengetedza application. Tsigira batanidza nhare mbozha kuburikidza neBluetooth 4.0. Iwe unogona kuvhura musuwo nekiyi yekuvhura, password, APP, zvigunwe zvemunwe kana kiyi yemakaniki. Ita shuwa yezvese-zuva chengetedzo iwe nemhuri yako, zviri nyore kuisa uye kushandisa, inokwana mikova mizhinji.
1. Yakachengeteka Lock Mode: Kunze kwepascode uye APP yemutungamiriri, vese vashandisi 'zvigunwe, mapasipoti uye makadhi eIC haakwanise kuvhura musuwo.
2. Tumira eKey: Kutendera mvumo yevamwe vashandisi 'App, maneja anobaya uye opinda mu "Send eKey" muApp, woisa runhare mbozha kana email account yakanyoreswa nevamwe vashandisi, nekumisikidza iyo mvumo nguva seyakatarwa, yekusingaperi, imwe-nguva kana cyclic, wobva wadzvanya pane "Tumira". Mushandisi ane mvumo haadi kuwedzera iro, uye anogona kushandisa iyo app kuvhura iyo loko mukati menguva yekutendera.
3.Gadzira Passcode: maneja anogona kuburitsa password paApp ne5 modes yesarudzo yako, inosanganisira zvachose, yakatemwa, imwe-nguva, tsika uye cyclic. Semuenzaniso, kodhi yekupfuura yakatarwa inogona kusetwa kuti ive kodhi yepaseti inoshanda kubva pa9am kusvika pa11 am mangwanani eChipiri ese.
1. Iko kukiya kuri nyore kuiswa here?
Ehe, Hapana kuiswa kwehunyanzvi kunodiwa. Unogona kuisa LVD-05F pamusuwo wako mukati maminetsi mashanu wega uine screwdriver chete. Uye inokodzera yakawanda-imwechete-humburumbira gonhi rekuvharira ese ari maviri kuruboshwe uye kurudyi ruoko mikova.
2. Ndeipi bhatiri inoshandiswa? Zvinotora nguva yakareba sei kutsiva bhatiri?
Kunze kwekushandisa bhatiri, 4 mabhatiri AA anogara kwenguva inopfuura makore 1.5
3. Ko kana bhatiri rapera?
Iko kune USB emergency interface, iwe unogona kuchaja kuti ivhure gonhi kana bhatiri rapera.